Store Keeper (Male) (150,000 ~ 200,000 M...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော ဓါတ်ငွေ့များကို Trading လုပ်သောCompany ကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - စတိုပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။
Posted 13/07/2017 Dagon Myothit (Seikkan) , Yangon Salary: 100,000 - 299,999 Experience:1-3 Years
Marketing Executive ( 250,000 MMK ) Cod...
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Material များကို Trading လုပ်သော Company တစ်ခုမှဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိရမည်။ - သွက်သွက်လက်လက်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။
Posted 07/07/2017 Mingaladon , Yangon Salary: 100,000 - 299,999 Experience:1-3 Years
HR Executive ( 250,000 -350,000 MMK ) Co...
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Material များကို Trading လုပ်သော Company တစ်ခုမှဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (2) နှစ်ရှိရမည်။ - Pay Roll နှင့် Recruitment ပိုင်းတွဲလုပ်နိုင်ရမည်။ - လူမှုဆက...
Posted 07/07/2017 Mingaladon , Yangon Salary: 300,000 - 499,999 Experience:1-3 Years
Marketing Manager (Construction Material...
ပုစွန်တောင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာ Diploma/Certificate များရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်ရှိရမည်။ - English(4) Skills ရရမည်...
Posted 03/07/2017 Pazundaung , Yangon Salary: 700,000 - 1,000,000 Experience:3-5 Years
Marketing Staff (150,000 ~ 350,000 ++MMK...
လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင်ရှိသော သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများခေါ်ယူနေ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ (1)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Medical ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
Posted 03/07/2017 Lanmadaw , Yangon Salary: Negotiable Experience:1-3 Years
Sales Executive ( Heavy Machine ) ( 400,...
The recruiting company is Trading Company located in Hlaing Tharyar Township. - Engineering Degree or Any Graduate - At least (3) years sales experience in related field - Computer literate - Willing to ...
Posted 30/06/2017 Hlaingtharya , Yangon Salary: 300,000 - 499,999 Experience:1-3 Years
Sales & Marketing Staff (Male) (Around 1...
ဗဟန်းမျြို့ နယ်အတွင်းရှိ အိမ်သုတ်ဆေးများကိုဖြန့်ဖြူးးရောင်းချပေးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - ဆယ်တန်းအောင် (သို့) ဘွဲ.ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ.အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ရ...
Posted 28/06/2017 Bahan , Yangon Salary: Negotiable Experience:1-3 Years
Assistant Engineer (Male) (200,000 ~ 300...
The recruiting company is Trading Company located in Lanmadaw. - Degree in BE (Mechanical / Electrical). - Minimum (1) years working experience in related field. - Excellent interpersonal and relationship building skills.
Posted 26/06/2017 Lanmadaw , Yangon Salary: Negotiable Experience:1-3 Years
Senior Accountant (Female) (300,000 ~ 35...
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော ရုံးသုံး၊ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးးရောင်းချပေးသောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level III အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -...
Posted 23/06/2017 Botahtaung , Yangon Salary: Negotiable Experience:1-3 Years
Graphic Designer ( Over 500,000 MMK ) (N...
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော အိမ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ Trading လုပ်သောကုမ္ပဏီ ကြီးတစ်ခုမှ ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရ့ရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ (5)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ အပြော...
Posted 23/06/2017 Dagon Myothit (North) , Yangon Salary: 300,000 - 499,999 Experience:1-3 Years
Junior Accountant (Female) (200,000 MMK)...
လှိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading ကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - B.Com (or) LCCI II အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (1) နှစ်ဝန်းကျင်ရှိရမည်။ - အတွေ့အကြုံမရှိသူများလဲ လျောက်ထားနိုင်သည်။ - စာရ...
Posted 22/06/2017 Hlaing , Yangon Salary: Negotiable Experience:1-3 Years
B2B Sales Manager ( 2,000,000 MMK ) Co...
The recruiting company is Trading Company located in Mayangone Township. -Bachelor’s Degree or Master’s Degree -Fluent English (Written & Spoken) -Minimum 8 years’ experience in solid B-B Sales -Hands On person and ...
Posted 21/06/2017 Mayangone , Yangon Salary: Above 1,000,000 Experience:8-10 Years
Salary: Above 1,000,000
Sales Executive ( 250,000 MMK or Nego ) ...
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Material များကို Trading လုပ်သော Company တစ်ခုမှဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Sale အတွေ့အကြုံ (2) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - Comput...
Posted 21/06/2017 Mingaladon , Yangon Salary: 100,000 - 299,999 Experience:1-3 Years